Bilaogy ao Zimbaboe, Burundi, RDC, Malawi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Oktobra 2018 4:48 GMT
Zimbaboe: Feno 82 taona amin'ny volana manaraka i Robert Mugabe, farany amin'ireo “lehilahy lehiben'i Afrika”. Nanomboka nimenomenona momba ireo drafitra fikarakarana ny fety tsingerintaona mihoa-pampana ny mpikambana ao amin'ny antokon'ny fitondrana ZANU-PF na dia eo aza ny fitontonganan'ny toekarena sy ny hanoanan'ny mponina. Amin'ny rahona maintin'i Zimbabwe, tsara hatramin'izao ny vanin-taonan'ny orana.
Ny adiadin'ny MDC izay niafara tamin'ny fisaratsarahan'ny antoko izay maro no nihetsiketsika mba hampitsahatra ny jadon'i Mugabe no lohahevitra lehibe amin'ny adihevitra ao amin'ny firenena. Manoritra momba io lohahevitra io ny The Zimbabwean Pundit fa tolona bebe kokoa eo amin'ireo “teknoraty” sy ny mpanentana ao amin'ny antoko ny fisarahana fa tsy adihevitra momba ny hoe handray anjara amin'ny fifidianana sa tsia.
Tamin'ny lahatsoratra tantara matanjaka This is Zimbabwe maneho ny tsy fahampian'ny hery nomen'ny fitondrana Mugabe ho an'ny Zimbaboeana.
“Izany no dikan'ny hoe mahantra sy malemy loatra ka tsy mahavita mifehy ny fiainanao ianao ary voatery miantehitra tanteraka amin'ny hafa isan'andro – mihevitra fa misy olona hikarakara anao. Izany no midika hoe anisan'ireo vahoaka tsy manankery ny ao Zimbaboe izay tsy manana fanantenana intsony amin'ny hoavy tsaratsara kokoa.”
Burundi: Agathon Rwasa manondro bilaogy vaovao manasongadina ny fijoroana vavolombelona avy amin'ireo sisam-patin'ny fandripahana Rwanda. Mampiseho lahatsoratra manasongadina ny fomba fanararaotan'ny FNL an'ireo tantsaha any ambanivohitr'i Bujumbura .
R.D.C: Amin'ny fifidianana ho avy, manahy mikasika ny fahamarinan'ny fizotry ny fisoratana anaran'ny mpifidy i Congogirl. Noho ny komitim-pifidianana manambara fa efa nisoratra anarana hifidy ny antsasaky ny mponina ao amin'ny firenena, ary manontany tena izy raha izany no hitranga amin'ny fitambaran'ny mpifidy mahafeno fepetra ao RDC.
Malawi: Manana lahatsoratra mahaliana hilazany ny toetoetry ny hopitaly sasany ao Malawi i Geeta. Manolo-kevitra am-pahalianana izy fa “afaka mampiasa ny fepetran'ny hopitaly ny olona mba handrefesana ny fahombiazan'ny fanjakana amin'ny fitsinjovana ny olony.”